Wasiirka Gaashaandhiga Kenya Yuusuf Xaaji oo si KMG ah loogu magacaabay xilka Wasiirka Amniga
Loading...	Home Wararka Wasiirka Gaashaandhiga Kenya Yuusuf Xaaji oo si KMG ah loogu magacaabay xilka Wasiirka Amniga
Wasiirka Gaashaandhiga Kenya Yuusuf Xaaji oo si KMG ah loogu magacaabay xilka Wasiirka Amniga	Tuesday, 19 June 2012 19:33	Madaxweynaha Kenya Mwai Kibaki ayaa xalay u magacaabay Wasiirka Gaashaandhiga Yuusuf Xaaji sii hayaha xilka Wasiirka Amniga iyo Arrimaha Gobolada, kadib markii uu todobaadkii hore uu geeriyooday Goerge Saitoti oo xilkaas hayay.
Yuusuf Xaaji ayaa xilkan si KMG ah u heynaya, iyadoo magacaabidiisa laga soo dhoweeyay dhulka Soomaalida ee Gobolka Waqooyi Bari, halkaas oo uu ka soo jeeda.
Wasiirka Gaashaandhiga Kenya Yuusuf Xaaji waxay aad isugu dhowaayeen wasiirkii geeriyooday, waxay isku mowqif ka ahaayeen howl galka Ciidamada Kenya ku galeen Koofurta Soomaaliya markii ay xadka ka tallaabeen Ciidanka Kenya.
Xilka Wasiirka Amniga Gudaha waxaa hoos imaanaya dhamaan Hey'adaha ammaanka, sida Booliska, Ciidamada dhar cadka, sirdoonka iyo Ciidamada amniga gudaha.
Yuusuf Xaaji ayaa noqonaya labo wasiir oo xil culus haya, gaar ahaan Wasiirada Gaashaandhiga iyo Amniga Qaranka iyo Maamulka Gobolada, sidoo kale waxay ka shaqeysaa Maamulka sideeda Gobolka ee dalka Kenya.
Waxaa uu ka soo jeedaa deegaanka Ijaara ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya, siyaasada Kenya wuxuu ku soo jiray 40-sano, isagoo la soo shaqeeyay saddexdii Madaxweyne ee soo maray Kenya sida Madaxweynayaashii Joma Kenyata, Daniel Arab-Moi iyo Mwai Kibaki oo ay hada isku xisbi yihiin.
Dadnaha ku nool Magaalada Gaarisa ee Gobolka Waqooyi Bari ayaa soo dhoweeyay xilka Wasiirka Amniga gudaha ee loo magacaabay, isagoo si aad ah uga soo shaqeeyay Gobolkaas oo uu maamule ka soo noqday isagoo 20-jir ah